Vaovao - Maninona ny vahiny no tsy mampiasa tsato-kazo rehefa manjono? Tian'izy ireo ny mampiasa kofehy manjono!
Any Chine dia mbola misy mpanjono marobe izay mbola mampiasa ny fomba fanjonoana mahazatra amin'ny tehina jono, saingy zara raha misy ny fanjonoana any ivelany, ary aleon'izy ireo mampiasa rojo fanjonoana amin'ny jono. Inona no antony? Fa maninona no misy fahasamihafana toy izany? Manaraka, araho ny KK hijerena!
1, faritra fanjonoana
Ny fihodinan'ny jono dia afaka mandefa lavitra, ary lehibe ny faritry ny jono, ary lalina kokoa ny halalin'ny jono. Somary kely ny faritra fanjonoana amin'ny tsatokazo, izay tsy azo atao afa-tsy amin'ny fanjonoana any anaty ranomasina, ary somary marivo kosa ny halaliny.
2 conditions Toetran'ny tontolo iainana amin'ny jono
Ny jono miharo trondro dia afaka manjono matetika eny ambonin'ny rano miaraka amin'ny rivotra sy ny onja, ary sarotra ny mahita ny fiovan'ny mitsingevana rehefa ny tsato-kazo dia misy rivotra sy onja, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny vokatry ny jono.
3 、 Isan'ny fitaovana
Toa tsorakazo, tsipika, fitsingevanana, farango ary bainga fotsiny ny tehina manjono. Raha ny marina dia mila zavatra maro hafa izy io. Ireo izay nilalao tehina mpanjono dia manana fahatakarana lalina momba izany.
Mora ihany ny mampiasa kofehy fanjonoana amin'ny jono. Raha mbola manana tehina sy tsipika ary jono ianao dia afaka milentika hatraiza hatraiza.
4 、 Frequency d'exploitation
Ny bainga ampiasain'ny kofehy fanjonoana amin'ny jono dia lehibe amin'ny ankapobeny ary tsy mila ovaina matetika. Raha ampiasaina ny bainga sandoka dia azo ampiasaina imbetsaka izy ireo. Somary kely ny maunu ampiasaina amin'ny paositry tanana ary mila ampiana matetika.
5, dingana fiandrasana
Matetika ny mpitsikilo dia manameloka raha misy kaikitry ny trondro amin'ny feon'ny lakolosy, ary somary milamina ny fizotrany. Fa ny tehina tanana dia mila mibanjina ny mitsingevana foana, izay mora hiteraka ny havizanan'ny maso.
6 、 Avy amin'ny fomba fijerin'ny Teknolojia
Betsaka ny tsipika fanjonoana ao anaty rodobe fanjonoana, izay mety hisy vokany tsara amin'ny famotsorana hery ary hahatonga ny trondro tsy ho mora esorina
Raikitra ny tsipika fanjonoana amin'ny tsatokazo. Rehefa miatrika ny trondro vaventy dia mamoaka ny heriny amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao sy ny fahombiazan'ny tehina manjono izay manana takiana avo lenta amin'ny haitao.
7 、 Amin'ny zoro fialamboly
Rehefa trondro lehibe iray no eo amin'ny lohan'ny jono, dia afaka mahatsapa tanteraka ny fizotran'ny ady ianao, izay mavitrika kokoa. Rehefa manjono trondro lehibe amin'ny tehina jono dia miankina amin'ny herin'ny fahaizany ary somary mandefitra ny fizotrany.
Eo ihany koa ny fanjonoana manjono dia mitady trondro ho azy fa tsy miandry ny hanaikitra ny trondro, fa ny fanjonoana bararata kosa dia miandry fotsiny ny hanaikitra ny trondro.
8 、 Raha ny fahitan'ny trondro kendrena
Misy fifandraisana misy eo amin'ny antony mahatonga ny saika tsy fisian'ny jono amin'ny tehina any ivelany ary ny trondro kendrena. Any amin'ny firenena any ivelany, trondro lehibe mpiremby ny ankamaroan'izy ireo, ary tsapa kokoa ny jono amin'ny sambo manjono. Ankoatr'izay, ny firenena vahiny amin'ny ankapobeny dia manana lalàna mitaky ny hamoahana trondro kely rehefa azony izany.
Ny tena tanjon'ny tsorakazo dia ny trondro kely, ny jono bebe kokoa, fa tsy ny "fialamboly" manjono!
Amin'ny ankapobeny, ny mpanjono ao an-trano dia matetika no mandray jono ho toy ny fomba hambolena faharetana sy hamboly fihetseham-po, fa ny mpanjono vahiny kosa dia mifantoka amin'ny fialamboly, ary ny fomba dia somary tsotra sy tsotra. Saingy, noho ny lazan'ny Luya any Shina, dia mihamaro ny mpanjono manatona an'i Luya hanjono. Tsikelikely, dia manadinika bebe kokoa izy ireo hoe ohatrinona ny zavatra azony sy maka jono ho mahafinaritra fa tsy manjono.